Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Belzika Michy Batshuayi tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "Batsman". Ny tantarantsika Michy Batshuayi momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahavariana avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizan'izy ireo misintona tanjona tsy dia mahagaga, fa vitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Michy Batshuayi izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Fiainana tany am-piandohana sy tamina fianakaviana
Manomboka, Michy Batshuayi Atunga dia teraka tamin'ny 2nd of October 1993 tany Brussels, Belzika. Teraka tamin'ny reniny, Viviane Leya Iseka ary i Pino Batshuayi, rainy. Ireo ray aman-dreny roa ireo dia avy amin'ny Afrikana Afrikana ary miverina any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Congo. Nifindra tany Belguim izy ireo mba hitady ahitra maitso ary hanomezana sakafo tsara ho an'ireo zanany mbola tsy teraka.
Niroborobo tany Bruxelles i Young Batshuayi izay nanohana ny ray aman-dreniny be fitiavana izay namporisika azy sy ny zandriny Aaron Leya Iseka (koa mpilalao baolina kitra) mba hampivelatra sy hampihatra ny fanatanjahantena nananany.
Ny fanohanana azy ireo dia nampivoatra bebe kokoa noho i Bathshuayi izay naneho ny hatsaram-pahefan'ny baolina kitra izay tsy vitan'ny hoe nahatonga azy hijoro teo anivon'ireo tanora mitovy aminy fa nibontsina teo amin'ny zandriny lahy izay noraisiny ihany koa ary liana tamin'ny baolina kitra.
Fotoana fohy taorian'ireo ray aman-drenin'i Batshuayi dia nanome baiko ny fitiavany ny baolina kitra amin'ny alàlan'ny fanoratana azy ao amin'ny Akademia tanora, RFC Evere, voalohany tao amin'ny tarika tanora efatra izay nanombohany ny asany.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Asa fanorenana
Ny lanjan'ny baolina kitra izay notondroin'i Batshuayi nandritra ny ezak'ireo tanora tao amin'ny kliobany dia ny fironany hiantsoroka lava amin'ny baolina tsy handalo, toetra iray izay nahatonga ny mpiara-mianatra taminy hihevitra azy ho fitiavan-tena.
Na izany aza, dia nahazo sitraka tamin'ny mpitaiza avy tamin'ireo klioba hafa izy, izay nahita ny fitiavan-tenany manokana. Mahatsiaro ny zatovo maro nandritra ny fahatanorany ny fifindra-monina tao amin'ny club club Youth Anderlecht tao 2007 izay nilalao tamin'ny fahaiza-mandroso sy ny tanjona napetrak'izy ireo.
Ny endriny lehibe dia tsy nahamarika ny klioba mpifaninana Standard Liège izay nanamafy ny tolotr'izy ireo tamin'ny 2008. Batshuayi dia nanao sary sokitra ho an'ny tenany tao amin'ny klioba niaraka tamin'ny fampisehoana mahatalanjona nataony ary nasondrotra ho an'ny ekipa zokiny fony izy taona 18.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Mitsangàna mba haka izany
Tsy i Batshuayi no nandresy tamin'ny fandrosoana tao anatin'ny asa izay tiany. Nahitana taratra azy tamin'ny tanjony 21 nandritra ny vanim-potoan'ny 2013 / 2014 ho an'ny Standard Liège. Ny fampisehoana an-tsary avy amin'ny maro hafa dia nahatonga azy nandresy ny loka Ebony Ebabe nomena ho fankasitrahana ireo mpilalao tsara indrindra Afrikana any ekipa voalohan'ny ekipa Belzika.
Bathshuayi dia nanohy nanoratra ny artistry tao Marseille, klioba frantsay izay nosoniaviny tao amin'ny 2014. Tany Marseille no nahitan'ny tarika fitifin-dalany ny fahalianan'ireo ekipa Anglisy ambony, anisan'izany i Chelsea FC sy Westham. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Relationship Life
Batshuayi dia iray amin'ireo mpilalao baolina kitra marobe izay mijery ny fifandraisany amin'ny fiainana. Izany dia mitazona ny tsirairay izay mieritreritra hoe iza no mety hahatonga ny sarivongana tsara tarehy amin'izao fotoana izao.
Tsy nisy ramatoa hita niaraka taminy nandritra ny hetsika iray na koa ny fitsangatsanganana. Raha maro no mino fa tsara ny mitazona ny fiainany tsy miankina, ny hafa dia mino fa fotoana fohy monja mialoha ny hanambarany ny sarimihetsika na ny sipany. Matoky izahay fa hanome fanampim-baovao momba ny fampandrosoana izahay rehefa mitranga izany.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Hametraka hevitra amin'ny FIFA Ratings
Michy dia isan'ny mpilalao tena miahy ny lanjany amin'ny lalao baolina kitra EA Sports. Jereo ny fanehoan-keviny amin'ny famoahana 2018 FIFA etsy ambany;
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina
Raha i Chelsea kosa i Batshuayi, dia nidina an-drivotra izy rehefa avy nilalao ny lalao mafonja iray dia nahatsikaritra azy nihomehy tamin'ny mpiara-mianatra aminy Alvaro Morata noho ny fahaverezana sazy. Ity tranga ity dia nitranga nandritra ny faharesen'i Chelsea tany Arenal tamin'ny farany tamin'ny fiarovana ny fiarahamonina 2017. Nosoloana an'i Morata i Batshuayi nandritra ny minitra 74th ny lalao noho ny tsy nahatalanjona azy.
Natao tamin'ny sarimihetsika 1-1 ny lalao, namela sazy hanapahana ny mpandresy. Alvaro Morata miaraka amin'ny Thibaut Courtois Tsy nahitana sazy an-dalambe izay nahitan'i Arsenal ny lalao. Ny antony nahatezitra ireo mpankafy dia ny fampisehoana lahatsary mampiseho an'i Batshuayi nihomehy an'i Morata izay nalahelo noho ny fahaverezana.
Na izany aza dia nandeha tao amin'ny Twitter i Batshuayi taoriana kelin'izay mba hanitsiana ny zavatra nalainy ho hevi-diso noho ny nanamarika izany:
"Wow lol ny olona sasany tena mino fa nihomehema ny mpiara-mianatra amiko ary / na izahay very? Miala tsiny fa diso fanantenana fa tsy "
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Tiavo ny tantara an-tsary
Batshuayi dia mahay mitandrina sy manaraka andian-tantara an-tsary. Ny fihetsiketsehana izay iray amin'ireo asa aman-draharahany taloha dia misy fiantraikany be lavitra noho ny fialamboly, araka ny filazany ny fahatsapany lamaody. Mahatsikaiky amin'ireo sariitatra tiany indrindra izy dia Sponge Bob ary toa tsy ampy ho an'ny sarimihetsika Sponge Bob izy.
Ankoatra izany, dia nitady miaramila mpanao ady totohondry izy indray mandeha. Ny boxer (sary etsy ambany etsy ambany) dia mampiseho ny maripanan'ny ranomasina ao ambanin'ny kitapony. Raha ny marina, ny fitiavany ny sariitatra dia tsy mahafantatra fetrany.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Big kid at heart
Batshuayi dia olona iray izay tsy mba toa maneho ny taonany araka izay asehon'ny lalao kilalao. Ny zanako 25 dia manana tahirin-tsarimihetsika goavana izay lazainy ho ny tranombakoka manokana. Ny tranom-bakoka "manokana" dia misy efitra fisakafoanana misy rakotra glasy vita amin'ny kilalao kely.
Tsy toy ny kilalao kely ihany, Batshuayi dia toa mahita kilalao lehibe iray izay toa mifanandrify amin'ny taonany. Ny sarivongana lehibe iray avy amin'ny sariitatra malaza Dragon Ball Z.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Antony mihemotra anarana
Noho ny fitiavany ny tantara an-tsary, nomena ny anarana hoe "Batsman" i Batshuayi, toetra izay tiany ary mamaritra azy koa. Ny endrika Batman dia heverina ho toy ny iray avy amin'ny maizina mba hanao ny tsy azo ialàna.
Tonga avy any amin'ny banky i Batshuayi ary mbola manao ny majika amin'ny famokarana tanjona. Raha niresaka momba ny tanjona dia nandalo ny tetikadiny fankalazana ny FIFA 2018 an'i Michy indray mandeha indray izy rehefa nahita ny baoliny nitifitra ny tanjona tanjona nanoloana ny tarehiny.
Mombamomba ny mpanoratra Michy Batshuayi Michy Batshuayi miora,Mitantara ny maha-olona
I Michy Batshuayi dia tia izay ataony sy manamaivana ny fanamaivanana comic na dia tsy mandeha aza ny zava-misy. Na izany aza, dia miezaka mafy ary mitady ny tsara indrindra vitany mba hahatonga ny zava-bitany ho sarotra.
Ankoatra izany, dia miara-mientana izy, manana fahatsapana diplaomasia ary manandratra ny fomba tsara indrindra azony atao mba hisorohana ny fifandonana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Michy Batshuayi momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Ilkay Gundogan tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pitiavana tsy hita isa
Tammy Abraham Childhood Story